क्रिकेटमा अनौठा प्रविधि, यस्तो हुँदैछ विश्वकप २०१९ | रिपोर्टर्स नेपाल
२०७६ असार १ आईतवार, १०:२७
२०७६ जेष्ठ २९ गते प्रकाशित, l २०:५५
जेठ २९, काठमाण्डौ । १२ औँ संस्करणको विश्वकप क्रिकेट बेलायत र वेल्समा जारी छ । विगतको विश्वकप प्रतियोगिताभन्दा यसपटकको भिडन्त विभिन्न कारणले फरक देखिएको छ । जसमध्य एक हो प्रविधिको प्रयोग । खेलका दौरान अम्पायरबाट कुनै गल्ती नहोस् भनेर पारदर्शिता कायम गर्न यसपटक उच्चस्तरको प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ ।
यो प्रविधिको सहयोगमा बलर र ब्याट्सम्यानको समीक्षा हुने गर्छ । अर्थात् बलरले कति बल सर्ट, फुल, गुड लेन्थमा फाले ? त्यस्तै ब्याट्सम्यान कुन बलमा बिट भए ? कुन बलमा उत्कृष्ट खेले भनेर एनलाइसिस गरिन्छ ।
२०७६ जेष्ठ २९ गते सम्पादित l २२:४३